Nampanantena Ny Hamaha Ny Fandrarana Ny Firesahan’Ireo Mpiasam-panjakana Amin’ny Fampitam-baovao Ny Governemanta Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Nampanantena Ny Hamaha Ny Fandrarana Ny Firesahan'Ireo Mpiasam-panjakana Amin'ny Fampitam-baovao Ny Governemanta Toniziana
Voadika ny 03 Marsa 2017 4:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, polski, Español, English
Praiminisitra Toniziana Youssef Chahed miresaka tamin'ny fampitam-baovao nandritra ny Fivoriambe momba ny Fampitoviam-penitra ara-pifandraisandavitra Manerantany taona 2016 tany Tonizia. Sary avy amin'ny ITU, nozaraina tao amin'ny Flickr , lisansa Creative Commons (CC BY 2.0).
Tao anatin'ny fandresena ho an'ny mpiasan'ny fampitam-baovao Toniziana, nampiato ny torolalana navoakan'ny fanjakana izay mandidy ireo mpiasam-panjakana amin'ny fomba ifandraisany amin'ny fampitam-baovao ny governemanta Toniziana.
Mitaky ireo mpiasam-panjakana tsy hiresaka amin'ny gazety sy tsy hanambara ny vaovao ofisialy raha tsy nahazoana alalana avy amin'ny lehibeny ny torolalana izay navoakan'ny Praiminisitra Youssef Chahed tamin'ny tenimita laharana faha 4 nivoaka tamin'ny 15 Janoary 2017:
Ho fanajana ny andraikitry ny mpiasam-panjakana amin'ny fifandraisany amin'ny fampahalalam-baovao, araka ny voasoritra ao amin'ny fitsipi-pitondran-tena sy ny etikan'ny mpiasam-panjakana, ny mpiasam-panjakana dia voaràra tsy hanao fanambarana na firotsahana an-tsehatra, na hamoaka vaovao ofisialy na antontan-kevitra amin'ny gazety na amin'ny fitaovana hafa, mifandraika amin'ny asan'izy ireo na ny rafi-panjakana iasan'izy ireo raha tsy misy ny fahazoan-dalana mialoha sy mazava avy amin'ny lehiben'izy ireo.
Nanameloka ny torolalana ny vondrona mpiaro ny zo sy ny fikambanana mampiroborobo ny fahalalahan'ny ny asa fanaovan-gazety sy ny fampitam-baovao na dia mifanaraka amin'ny fitsipika misy mifehy ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana ao amin'ny minisitera sy ny andrim-panjakana aza izany. Ankoatra ny antso ho an'ny governemanta mba hanaisorana avy hatrany ireo torolalana ireo, nanararaotra ny fisian'ny olana toy ny fahafahana manery ny governemanta mba hamerina hijery ny Didim-panjakana laharana faha 4030 tamin'ny 4 Oktobra 2014 momba ny fitsipi-pitondran-tena sy ny etikan'ny ny mpiasam-panjakana ny mpanao gazety ao an-toerana sy ny sendikàn'ny fampitam-baovao.
Mandràra ny mpiasam-panjakana mba tsy hanao fanambarana amin'ny haino aman-jery sy hamoaka vaovaom-panjakana tsy nahazoana alalana avy amin'ny lehiben'izy ireo na ny talen'ny andrim-panjakana iasan'izy ireo ny didy hitsivolana. Navoaka mifanaraka amin'ny didim-panjakana voalaza etsy ambony ny torolalana.
Nandrahona ny hanao hetsi-panoherana ny Sendika Nasionalin'ny Mpanao gazety Toniziana niaraka tamin'ny vondrona hafa misolotena ny fampitam-baovao matihanina raha toa ka tsy mihantona ny torolalana izay niteraka adihevitra ary averina ho dinihina indray ny didim-panjakana laharana faha 4030, ao anatin'izany ny fihetsiketsehana izay notontosaina tamin'ny 28 Febroary sy ny fitokonana teo amin'ny sehatra fampitam-baovao .
Na izany aza, nanapa-kevitra ny hampiato ny torolalana sy hanitsy ny hitsivolana laharana faha 4030 ny governemanta anio 3 Martsa mandritra ny fivoriana nisy teo amin'ny solontenam-panjakana sy ny vondrona misolotena ny mpanao gazety ary ny fampitam-baovao matihanina izay natao tamin'ny 27 Febroary.
Nizotra miandalana tamin'ny fanohanana ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao i Tonizia hatramin'ny taona 2011 nanonganana an'i Zine el-Abidine Ben Ali, izay nitana ny fahefana nandritra ny 23 taona, izany dia ao anatin'ny ezaka mba hanatsarana ny fangaraharan'ny governemanta sy hampihenana ny kolikoly. Tamin'ny taona 2016, nohamafisin'ny fandanian'ny parlemanta ny lalànan'ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao (Lalàna laharana faha-22 tamin'ny 24 Martsa 2016 momba ny fahazoam-baovao) ny zo ara-dalàmpanorenana momba ny fahazoam-baovao. Tamin'ny herinandro lasa teo, nandany lalàna miaro ireo mpanao ampamoaka manome porofo amin'ny resaka kolikoly ny parlemanta. Na izany aza, matetika sarotra ny mampihatra ireo fanavaozana ireo .
Toa hita fa niezaka nitolonaho amin'ny fanovàna demaokratika ny mpanao gazety sy ny vondrona mpiaro ny zo ao Tonizia. Araka ny nolazain'ny filohan'ny Sendikàn'ny Mpanao Gazety Neji Bghouri hoe : ” Manohy ny asany ny fikambanana matihanina mba hanakanana ny fepetra rehetra izay mety hametra ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.”